Blog | Ọkọwa Okwu Ahụike
Belata Gas Stomach Gas Thezọ Ahụ
Enwere ụzọ ndị dị ndụ iji belata gas ị na-agafe? Gbalịa igbochi mgbochi. Mụta otu esi emegharị gas n’arụ gị ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji hụ na ị bụ onye isi ala, enwere ọtụtụ ụzọ esi belata belching, flatulence, abdominal bloating and mgbu. A na-ejikọkarị gas gas na ọrịa bowel syndrome. Ọrịa ndị ọzọ na-akpata nnukwu nsogbu na-ebutekarị ọrịa ndị ọzọ na-abụghị naanị "onye ọrụ gọọmentị."
5 Tozọ Iji Mee Ka Obi Obi Dị Gị Mma
(Ihe Omume Ezinaụlọ) Ọ bụrụ n’iche na ị maọbụ onye ị hụrụ n’anya ga-arịa ọrịa obi ma ọ bụ nwee nkụchi obi, ọ bụ ihe kwere nghọta. Ọria obi bụ isi ihe na - akpata ọnwụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na United States, dị ka Heartlọ Ọrụ Mba Ọrịa, Ukwara, na Ọbara Ọbara (NHLBI) si kwuo. Nchọpụta nyocha gosipụtara na ị nwere ike belata ihe egwu gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị sonyere ndị ezinaụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ndị ọrụ. Supportdị nkwado mmekọrịta a nwere ike ịbụ isi ihe ịga nke ọma gị.
Etu esi ewere Sauna
Site na saunas na saunas steepụ na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya na-abịa mkpa nke ịmụ iji ha nke ọma na n'enweghị nsogbu. Edepụtara n'okpuru bụ usoro ọdịnala ndị Finns ga-eme iji rite uru zuru oke na saunas ha na-asacha. Na Finns kwesịrị ịma, dịka ihe dị ka otu onye n'ime mmadụ ise bi na sawụ nwere sauna. Ekwesịrị ịkọwapụta na mmadụ kwesịrị ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka nlekọta ahụike tupu ịmalite ụdị sauna ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ịtụnanya na ojiji sauna adịghị emerụ nde mmadụ ise gbakwunyere Finns na ọtụtụ ndị ọzọ maara otu esi edebe sauna ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Etu esi ewelata nrụgide ọbara site na iji ọgwụgwọ nkịtị
Ọtụtụ mgbe, nrụgide bụ ihe na - eso akpata ọbara mgbali elu. Mgbe obi ruru anyị ala, ọ bụ ihe niile dị anyị n'ahụ, gụnyere arịa ọbara. Dị ka anyị hụworo, ọ bụ mmachi na mgbochi nke akwara ọbara na-eme ka ọbara mgbali elu yabụ ihe ọ bụla na-eme ka ihe ndị a mebie ma ọ bụ zuru ike bara uru.
Bright Amponsah June 24, 2020
Ehlers-Danlos syndrome (EDS) bụ nsogbu nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike ịlaghachi azụ ma ọ bụ nwee ike na-adabere n'ụdị ụdị EDS ị nwere. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịnwee ụdị nwere isi ma nwee ụmụ, ụmụaka ndị ahụ nwere ohere 50% iketa ọrịa ahụ.
Abamuru Ahụike Ahụike nke Cannabidiol
A na-ezo mmanụ mmanụ sitere na hemp dị ka mmanụ Cannabidiol ma ọ bụ mmanụ CBD. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ziri ezi na oke nke Cannabidiol na THC nwere ike ịdị iche dabere na ngwaahịa na onye nrụpụta.
Mmanụ Nkwụ Bụ Mmanụ Ahụike Ọzọ
Bright Amponsah June 23, 2020
Ugbu a ndị na-emepụta nri na US kwesịrị ịkọpụta ọdịnaya ha nwere abụba, ụfọdụ n'ime ha na-agbanye mmanụ ike ka ọ dị ka nkwụ na aki oyibo. Obi dị m ụtọ ịhụ mgbanwe a ka mma! Enwere m olileanya na ngwaahịa ahịa ụlọ ahịa na-aga n'ihu na-ewu ewu.